Farmaajo oo Al-Shabaab u gudbin kara Drones-ka la qabtay | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo Al-Shabaab u gudbin kara Drones-ka la qabtay
Qeylo-dhaanta ka dhanka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa cirka isku shareertay waxaana soo baxaya shakiyo kala duwan uu ku aaddan u jeedada laga lahaa Drones-ka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliye ku xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, Gen Cabdalla Cabdalla, oo ka mid ah shaqsiyaadka fara ku tiriska ah ee sida weyn ula socda dhaqdhaqaaqa NISA, ayaa muujiyay cabsida uu ka qabo in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhawaan lagu qabtay Muqdisho uu Farmaajo u gudbiyo Kooxda Al-Shabaab.
Gen Cabdalla, wuxuu si dahsoon u tilmaamay in Farmaajo uu hore Kooxda xiriirka la leh Al-qaacida, ee Al-Shabaab ugu gacan galiyay diyaarado dalka lagu keenyay magaca hay’adda Nabad-sugidda.
“Xildhibaan Zakriye wuxuu sheegay in Farmajo ku yiri drones-ka USA ayaa cadaadis igu saartay inaan la siidayn karin!. Taas macneheeda waa in Farmajo uu hore dhowr drones oo magaca NISA lagu keenay uu u gudbiyay Al-Shabab”. Ayuu yiri Cabdalla.
Wuxuu xusay in Farmaajo, uu hadda ku dhiiran waayay inuu si degdeg ah dhanka Al-Shabaab ugu wareejiyo diyaaradahaan, kadib markii ay ku baraarugeen hay’ado sir-doon oo ka socda dalal shisheeye.
“Marka indhaha loo shitay, odayga waa ka baqay inuu hore ka daayo, laakiin, waxaa haddaba suuragal ah in qayb ka mid ah ay Al-Shabab u gudbeen ama loo gudbin doono dhawaan”. Ayuu ku sii daray.
Tan iyo markii uu Farmaajo galay Madaxtooyada waxaa billowday wada-shaqeyn xooggan oo ka dhaxeysa hoggaanka Dowladda iyo Al-Shabaab, waxaana bartamahii 2017 soo if-baxay isku-milan labada dhinac ah.
Agaasimihii hore ee NISA, eedeysane, Fahad Yaasiin, oo ah shaqsi is qariya, ayaa muddo ugu sarreeyay hay’adda Naba-sugidda, waxaana la rumeysan yahay inuu masuul ka yahay xiriirka Al-Shabaab iyo Madaxtooyada.
In ka badan 15 maalmood ayaa laga joogaa markii lix diyaaradod oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah [Drones] lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kuwaas oo Zakariye Xaaji Cabdi, uu ka soo raray dalka Turkiga.